susan.doktor | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: Susan Doctor
နေအိမ် > Susan Doctor
Susan Doktor သည်စာနယ်ဇင်းသမားနှင့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ သူသည်နယူးယောက်မြို့မှရထားဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာခရီးထွက်ခဲ့သည်. သူမသည်အကြောင်းအရာများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်, ဘဏ္financeာရေးအပါအ ၀ င်, ခရီးသွား, နှင့်အစားအစာနှင့်စပျစ်ရည်ကို. သူမကိုတွစ်တာ @branddoktor ပေါ်တွင်လိုက်နာပါ (သို့) သင်ဒီမှာနှိပ်ပါ ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ